Hadalka Bilaash Ah Ma Ilaalinayo Sumcaddaada | Martech Zone
Jimco, Janaayo 27, 2012 Jimco, Janaayo 27, 2012 Douglas Karr
Sam Montgomery waa akhriste Martech Zone oo ila soo xiriiray oo ku saabsan sheeko ku saabsan xirfad yari kubbadda cagta ah oo lagu magacaabo Yuri Wright. Yuri waxaa si firfircoon u qortay Michigan State until ilaa dadka qaar ay aqriyaan qoraalkiisa. The Tweets ayaa lagu soo bandhigayaa Chat Sports oo aan amaan ku ahayn shaqada (NSFW)… kaliya ogow inay yihiin kuwo edeb daran.
Yuri Wright, oo ah 4-xiddig CB ah oo ka socda New Jersey, ayaa mar uun loo waday Michigan fasalka 2012. Horaantii bishaan, shaqaalaha tababarka ee Michigan ayaa si qoto dheer u eegay rajada ka dib markii arday ka walwalsan ay u direen iskuullada ereyada ereyada ee Yuri uu ku qoray bartiisa Twitter-ka oo ahaa mid jinsi iyo mid galmo oo aan la aqbali karin.
Runtii waxaan ka hadlay dhowr jaamacadood oo arrintan ku saabsan oo aan ardayda u sheegay wax kasta waxay ku duubayaan baraha bulshada maanta waa wax saameyn ku yeelan doona rajadooda shaqo ee wadada. Qaarkood way naxsan yihiin, qaar badan baa u maleynaya inay cadaalad darro tahay… laakiin xaqiiqda ayaa ah taas kuwaas oo Kuwa la qortay ee Michigan waxay si toos ah uga tarjumayaan jaamacaddooda.
Michigan waxay dooratay ficilka ku haboon ee ku saleysan xaalada. Waxaan aaminsanahay in Mr. Wright uu bartay cashar adag, sidoo kale. Waan hubaa inaan kaliya afka u baxayay si aan dhibco ula helo taageerayaashiisa oo aan u helo qosol yar. Haddii uu majaajiliiste ahaan lahaa, wuu fiicnaan lahaa… laakiin maadaama uu shaqaale ka yahay Jaamacad aragti sare leh, waa tan dhacday.
Dhaqdhaqaaq kasta oo aad ku qaadatid internetka wuxuu leeyahay cawaaqib. Waa sababta run ahaantii aysan jirin wax sidaas oo kale ah daahfurnaantaMore waa intaa kala -duwanaansho. Kama baxo jidkeyga si aan dadka uga xumeeyo internetka, laakiin xitaa waxaan lumiyaa kuwa raacsan waqti ka waqti kuwaas oo aan dan ka lahayn dareenkeyga kaftanka ah.
Markii aan qoro wax risque ah, kaliya ma lihi waxaan raacayo qof raacsan, sidoo kale waxaan qatar galiyaa kafaala qaadayaasha balooggeyga iyo macaamiisha wakaaladda suuq geynta. Ma jirto hab aan si buuxda u noqon karo hufnaan! Waan jeclahay kaftanka midabbada ka baxsan… hadday siyaasad ahaan khaldan yihiin, waan sii adkaynayaa sida caadiga ah waan qoslaa. Waa ra'yigeyga kaliya, laakiin xaqiiqda ah in qof walbaa uu nacas nugul yahay maalmahan waa mid laga cabsado - gaar ahaan sida nolosheena ay ugu ciyaaraan internetka.
Waan la noolaan karaa xaqiiqda ah inaan waayey qof raacsan iyo, malaha aqriste, laakiin wali way i dhibtay. Waxay igu dhibtay inuu jiro qof bannaanka jooga oo aan moodayay inaan ahay qof aanan ahayn. Laakiin waa inaan gadaal iska dhigaa oo aan horay u sii socdaa. Kaamil ma ahan, waan iska siibanayaa marmar. Iyo… dadka qaarkiis ma jeclaan doonaan aniga. Waa xaqiiqo fudud.
Laakiin waxaan ahay nasiibXirfadayda ma bilaabaneyso. Anigu ma ihi shaqaale qorista ama shaqaalaha qof kale. Ma qiyaasi karo halka aan noloshayda ku jiri lahaa haddii ay jiraan sawirro Facebook ah, Twitter - ama ka sii xun - Youtube markii aan ku jiray da 'yarta. Waxaan ahaa si buuxda u faraha ka baxay. Waxaan u maleynayaa inaan ku shaqeyn lahaa shaqo adag meel!
Miyuu u qalmaa fursad labaad? Haa… kulligeen waan qabannaa. Nasiib wanaag wuxuu helay mid markii CU ay soo qaadatay:
Waxaan sameeyay qalad aad u weyn, ”ayuu yiri Wright. “Xaqiiqdii waxaan bartay cashar qiimo leh, mana balan qaadayo inaysan wax sidan oo kale ah dib u dhici doonin. Qof kasta oo i garanaya wuu ogyahay in taasi aysan ahayn dabeecadayda dhabta ah ama qofka aan ahay runtii. Ma doonayo inaan halkan fadhiisto oo aan isku dayo oo aan cudurdaar ka bixiyo wixii aan sameeyay. Kaliya waxaan noqonayaa nin oo waxaan dhahaa waan qaldamay waana ka bartay.
Ayaa garanaya… maalin maalmaha ka mid ah waxaad u baahan kartaa fursad labaad, sidoo kale. Waxba yaan lagu waalan meesha, dadweynow! Dadku way daawanayaan… inbadanna ma laha dareen kaftan ah.
Tags: kubada cagtaqorista kubada cagtaMichiganTwitteryuri wright